Norway oo baaris dheer ku samaynaysa in muwaadin Norwegian uu lug ku lahaa weerarkii westgate – Radio Daljir
Oktoobar 11, 2013 5:45 b 0
Oslo, October 11, 2013 – Dowladda Norway ayaa dabagal ku bilowday warar soo baxay intii uu socday weerarkii Westgate ee dhimasahda badnaa, warkaas oo sheegayey in muwaadin u dhashay dalka Norway uu qayb ka ahaa weerarkii Westage.
Wargayska The New Times ayaa sheegay in ay dowladda Norway u dirtay baarayaal caalami ah dalka Kenya, si ay u helaan xog dheer oo ay booliska uga gacan siiyaan macluumaadka la xiriira dadka qaybta ka aha weerarkaas.
War-bixin horay uga soo baxday Kenya ayaa lagu sheegay in weerarka uu lug ku lahaa mudaawin u dhashay balse asal ahaan ka soo jeeda Soomaaliya, dalalka reer galbeedka ayaa walaac daran ka muujiyey xubnaha u haysta dhalashada dalalkooda balse garabka siiya Al-shabaab.
Ururka Al-shabaab ee fadhigoodu yahay Soomaaliya ayaa sheegtay masuuliyada weerarkii khasaaraha badan dhaliyey ee Westgate ee magaalada Nairobi, kaas oo weli lagu raad joogo ragii ka dambeeyey falkaas.
Kenya oo Nairobi ku xirtay tobbanaan xujey Soomaali ah iyo safaarada Soomaalida oo ka hadashay